4C, 4A, 4B र ब्ल्याक प्राकृतिक कपाल को लागि3कर्ल र प्रकार टाइप गर्नुहोस?
प्रकार4र 3A, 3B वा 3C बनावटमा भिन्नता?
मुख्य दुई घुमाउरो कपालहरू रंगको महिलाहरूको लागि धेरै समानता, मतभेदहरू र सामान्य कारकहरू छन्। उदाहरणका लागि, जो3टाइप गर्दछन्, त्यो गीला हुन्छ जब यो भव्य देखिन्छ। तर चाँडो सुत्न सुरु हुने बित्तिकै यसको घुमाउरो राज्य फर्काउँछ।
प्राकृतिक 4A 4b र4कपाल बनावटका साथ ती सबै अनोखी र सुन्दर कर्ल ढाँचाहरू छन्! तथापि, यो बनावट उनको तल्लो कर्ल ढाँचाको कारण हेरचाह गर्ने सबै जटिल र जटिल पनि हो।
टाइप गर्नुहोस्4प्राकृतिक कपाल घुमाउँदा घुमाउनेछ र यसलाई सूखी हुँदा हल्का कर्ल वा कुन्निहरू छन्। म सबै प्रकारका प्राकृतिक प्राकृतिक कपालहरू माया गर्छु, र म धेरै खुसी छु कि धेरै महिलाहरू उनीहरूका प्राकृतिक कपाल विस्तारहरू सुरू गर्न थाले।
म तपाईंको साथ बालों को हेरचाह गर्न विभिन्न बाल बनावट र केहि महान सुझावहरु बीच केहि महत्वपूर्ण भेद साझा गर्न जाँदैछु।
रिंगलेटहरू वा कोइलहरू केवल धेरै तंग कर्ल हुन् जहाँ कर्स व्यास मात्र केही मिलिमिटर चौडाई हुन्छ। यो पोस्टको मेरो लक्ष्य भनेको तपाईं सबै भन्दा राम्रो तरीका पत्ता लगाउन र लामो, मोटो, र कपाल को एक स्वस्थ हेड को बनाए राखन को लागी सबै केहि सिक्न को लागी मदद गर्न को लागी हो कि तपाई के हो कि बनावट हो।
1 के टाइप3कपाल छ?
5 प्रकार4घोडा छ?
9 कसरी हेरचाह गर्ने?
9.1 मानव कपाल एक्सटेन्सन
9.1.1 अन्य उत्पादनहरू:
9.4 SHAMPOO र CONDITIONING
9.5 LOC विधि
9.6 सुतिरहेको छ
के टाइप3कपाल छ?
3 कपालका साथ ती व्यक्तिहरू धेरै शरीर, उछाल र तिनीहरूका कपालमा चमक हुन्छन्। नाक सामान्यतया चमकमा उच्च हुन्छ। Luster बाल शाफ्ट को बन्द को दर्शािन्छ तरीका को संकेत गर्दै छन्। कपाल सामान्यतया शैलीमा सजिलो हुन्छ, हेरफेर गर्नुहोस् र सीधा गर्नुहोस्। सानो बाल उत्पादनको लागि आवश्यक छ यी कर्लहरू परिभाषित गर्नुहोस्। म 3A, 3B र 3C को बीच मतभेद तोड्न जाँदैछु।
तीसँग 3A बाल सबै भन्दा कम कर्ल पद्धति छ। 3A भन्दा कम केहि पनि दुई कोटिमा खसेको छ। ती बाल प्रकारका साथ 2-2c लहरहरू र कर्ल हुनेछैन। 3A प्राकृतिक कलर प्रकारहरू प्राय: यसको लागि उच्च चमक छ, यसको मतलब यो उच्च चमक छ।
3A घुमेको बाल सामान्यतया राम्रो तरिकाले राम्रो कर्ल क्यान्सरहरू, तेलहरू, सामान्य रूपमा कंडीशर वा भारी कर्ल उत्पादनहरूमा छोड्नुहोस् किनभने यो क्यान्सर तल पार्ने हो र यसलाई घुमाउनुको साटो लुगा लगाउँदछ। यो कपाल बनावटमा पानी आधारित हल्का हाइट-क्यान्सरहरूसँग उत्तम हुन्छ।
यी कर्लहरूसँग पूर्ण बैरल साइड कर्ल छन्। कपालको लम्बाईको कारणले क्यान्सरको क्यान्सर घटाउँछ। "एस" आकारमा ड्रिग्नको लागी, यो घुमाउरो भन्दा अधिक तरकारी देखा पर्दछ। आफ्नो कपालमा गलत उत्पादन प्रयोग गर्नबाट बचाउन एक उत्कृष्ट तरिका अवयवहरूलाई हेर्नु हो। यदि पहिलो 1-3 अवयवहरू खनिज तेल वा पेट्रोलियम छन् भने सम्भावना भन्दा बढी, उत्पादन तपाईंको प्राकृतिक कपालको लागि ऊन वा तेल हुनेछ।
मेरो अनुभवबाट प्राकृतिक कपाल प्रभावकारी हुनु, मैले देख्छु कि यो कर्ल ढाँचा उन हिस्पैनिक हुन् भन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
यी कर्लहरू एक सरल धोका परिभाषित गर्न र कामहरूमा राम्रो स्प्रे छोडेर जानुहोस्। त्यसपछि बालोंलाई सुत्न अनुमति दिनुहोस्।
फोटो क्रेडिट IG: taty_froever
तीसँग 3b कपाल3कपालमा समान गुणहरू छन्। यो कपालको ढाँचा पनि सामान्यतया निकायहरूसँग चमकमा उच्च हुन्छ र कपाललाई उछालिएको हुन्छ। 3b कपालको कर्ल ढाँचा थोडा ठिक र 3a भन्दा सानो छ। कर्ल को बैरल एक विस्तृत क्रेयोला मार्कर जस्तै छ।
3b कपाल जहाँ तपाइँ बाल चार्ट भित्र फ्र्रिज र puffiness हेर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 3b प्राकृतिक बनावटका साथ ती व्यक्तिलाई खण्डमा फ्रिज राख्नको लागी छोटो-कंडीशनर र केही हल्का कर्ल क्यान्सर प्रयोग गर्न आवश्यक हुन सक्छ। तथापि, यो अझै अझै सीधा छ र 3b प्राकृतिक कपाल परिभाषित गर्न धेरै आवश्यक छ।
धुलो र 3b बनावट भएकाहरूका लागि सर्वोच्च र एक फैशनेबल शैली हो। यदि यो तपाईंको कपाल हो भने त कम तपाईंले हेरचाह हेरचाह गर्नुहुन्छ, अधिक कर्ल परिभाषित गरिनेछ। यस प्रकारको कपालमा प्रयोग गर्ने ठूला उत्पादनहरू 3A को जस्तै छन्। जो उत्पादनमा ग्लिसरीन छ त्यसमा राम्रो काम गर्दछ किनकि यो पानीमा आधारित तेल हो र कपाल तल वजन बिना उच्च परिभाषा दिनेछ।
यद्यपि कुनै पनि र कुनै पनि जातिले 3b घुमेको बाल हुन सक्छ, सामान्यतया मिश्रित वा बिरोलिक व्यक्तिमा देखा पर्दछ। कालो वा अफ्रिका अमेरिकन जो अन्य जातिको साथ मिल्दो छ जुन सामान्यतया स्ट्राटर बाईकल हुन्छ प्रायजसो ढोका कर्ल हुनेछ। तथापि, तपाईंलाई 3B कर्ल ढाँचा गर्न बहाली हुनु आवश्यक छैन। धुलो र जानुहुन्छ धेरै सामान्य र लोकप्रिय छन् जो 3B कपाल छन्।
फोटो क्रेडिट ओजी: @naturalhairobsessed_
3c कपाल एक अद्वितीय विशेषता छ कि 3a र 3b छैन। 3b कपाल तल बरू सुरू गर्न सुरु हुन्छ। अर्थ कि यो बाल शाफ्ट को दिशा मा सीधा बाहिर बढन शुरू हुनेछ, तब कपाल को रूप मा लामो हुन्छ र यसको वजन छ, यो घुमावदार fro भनिएको गोल आकार बनाउन शुरू हुनेछ।
Corbin Bleu यो बनावटको उत्कृष्ट उदाहरण हो। 3c हेभर कर्ल क्रीम र केही हल्का पानी आधारित उत्पादहरू बीचको मिश्रणको आवश्यकता पर्दछ। यो एक उत्पादन मायालु बनावट हो। मेरो अधिकांश क्लाइन्टहरू जसमा 3c कपाल लगभग कुनै पनि उत्पादन प्रयोग गर्न सक्दछ।
यो ढोका घुमाउने र तंग कोइली कपाल बीचको राम्रो माध्यम हो। यो कपाल कष्ट हुन्छ, र कपाल को परिभाषित गर्न र कम से कम फ्रिज राखन मद्दत गर्नको लागि कपाल हेरचाह उत्पादन आवश्यक पर्दछ।
3c क्यान्सर भएकाहरूले कम धुलो गर्न र जानुहुन्छ र उनीहरूको दिनचर्यामा अधिक स्थिर रहन सुरु हुनेछ। 3c कर्ल परिभाषित गर्नको लागि सबै भन्दा साधारण तरिका धो आउटको रूपमा घुमाईएको छ र जानेको लागि थप समय र उत्पादन चाहिन्छ।
3c कपालको लागि एक ठूलो कर्ल परिभाषित उपकरण डेनमार्क ब्रश हो। बजारमा ब्रश परिभाषित गर्न अन्य कर्ल अब धेरै छनौट छ।
धेरै महिलाहरु जसमा 3c कपाल छन् दुवै घनत्व र मोटाईमा आउँदा दुवै संसारको सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ। घनत्व अर्थ तपाईं कति कपाल कपाल र गहिराईलाई प्रत्येक कपाल झरना कस्तो हुन्छ र घुमाउरो प्राकृतिक कपालको पूर्ण टाउको सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ!
फोटो क्रेडिट ig @simplyshumba
प्रकार4घोडा छ?
नमस्कार, मेरो प्रकार4प्राकृतिक डिवा! यदि तपाइँ यो पोस्टमा बनाउनुभएको छ भने, तपाइँ सम्भवतः टाइप4कपालमा सबै चीज खोज्दै हुनुहुन्छ। ठीक छ, हामीले तपाईंलाई ढाकेको छ। यो4कपालमा अन्तिम मार्गदर्शिकाले तपाइँलाई कसरी टाइप गर्नुहोस् यदि तपाइँसँग टाइप गर्नुहोस्4कपालहरू सुरक्षात्मक शैलीका लागि तपाईंको कपालको हेरचाह गर्ने बारे निश्चित गर्नुहोस्। दाँया मा जानुहोस्।
टाइप गर्नुहोस्4कपाल को रूपमा उल्लेख गरिएको छ nappy or kinky, तर वास्तवमा, यो सबैभन्दा जरुरी कपाल प्रकार हो। कर्ल यति तंग छ कि बाल व्यवसायीहरूले यसलाई कोइलाको रुपमा लिन्छन्। कोइली प्राकृतिक कपाल बढ्छ र बाहिर। यसले लटका लिनको लागि धेरै उत्पादन र हेरफेर आवश्यक पर्नेछ। टाइप गर्नुहोस्4प्राकृतिक कपाल नरम र चम्किलो छ। यसमा कम उछाल भएको कम चमक छ जबसम्म बाली एक शैलीमा परिभाषित हुँदैन। टाइप गर्नुहोस्4प्राकृतिक कपाल यो आकारको हुन सक्छ र यो नमीलाई माया गर्दछ। अधिक जान्नुहोस् उनीहरुसँग भेटघाट गरेकी छिन्.
4A कपाल टाइप4स्पेक्ट्रम को तीन ढाँचा मध्ये एक हो। यो कपाल प्रकार एक टाइट्स कर्ल सिर्जना गर्दछ जुन एक सर्पिल वा सानो कुंडली जस्तो देखिन्छ। यो परिभाषाले पर्याप्त मात्रामा नमिलेको बेला देखाउँछ। मेरो कोटी जो यो कोटीमा आउँछ हुन सक्छ एक भन्दा बढी कर्ल पैटर्न। तर 4a प्रायः हुनेछ।
4 कपालको सानो कर्ल वा कोइलहरू छन्। कर्लको आकार पूर्ण रूपमा हाइड्रेटेड हुँदा पेंसिलको हुनसक्छ। यो कर्ल ढाँचा राम्रो तरिकाले मोडि आउट, चोटी बहिष्कार, Bantu गधाहरू, र धेरै अन्य शैलीहरूसँग हुन्छ।
यद्यपि यो बनावटको साथ धोने र जाने सम्भव छ, अधिकांश महिलाहरु हर्षको कारणले यो शैलीलाई अप्ट नगर्ने। 4a कपालको घुमाउरो प्रकृतिको कारण चरम सिकार छ र यसको सही लम्बाइ बिना खिच्ने बिना देखाउन सकिंदैन, यो एउटा शैली हो। 4A बाल ग्लाइसरिन आधारित उत्पादन संग राम्रो छ। कपाल को porosity मा निर्भर गर्दछ, तपाईं नमी मा मुहर को लागि एक भारी कर्ल क्रीम को आवश्यकता हुन सक्छ।
यदि तपाईं एक कठिन समय निर्धारण गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंको कपाल एक आकारको कर्ल हो वा तंग z-curl तपाईं शायद एक हो 4B, मध्यमा दायाँका रूपमा पनि चिनिन्छ। यो कपालको प्रकारले साँच्चै टाइट्स-कर्ल वा ढीलो जे-कर्लको मिश्रण छ।
4b कपाल प्रायः 4C कपाल भन्दा बढी लचिलो हुन्छ र एक थोपा अगाडी बढ्न सक्छ र 4C कपाल भन्दा थोडा लामो हुन्छ। 4b कपालको साथ मेरो डिभाहरू कपासको उपस्थितिले कपालको कपाललाई परिभाषित गर्दैन। यसले कर्ल पप बनाउनको लागि केही प्रयास गर्दछ।
यो कपाल कोइल र रिंगलेटको मिश्रण छ 4b महिलाहरु र आकृतिहरु र शैलीहरु को अधिकांश उनको कुनै पनि वैसे पनि। 4b सामान्यतया उत्कृष्ट हुन्छन् र सजिलै तोड्न सजिलो हुन्छ र निरन्तर नमी चाहिन्छ।
कम हेरफेर शैलीहरू लम्बाइ बढ्न र कायम राख्न एक राम्रो तरिका हो। MNHE Coily Collection, साथ नै अफ्रो किन्की संग्रह, यो कर्ल ढाँचामा आश्चर्यजनक रूपमा मिश्रण गर्न विस्तार र क्लिप-इन्स प्रस्ताव गर्दछ।
छवि क्रेडिट @2frochicks
4C कपाल घनत्व प्याकेड र 4b सँग मिल्दो छ, तर यस प्रकारको कपालको टाइपमा कम परिभाषा छ र उच्चतम मात्रा घटाउने अनुभव गर्दछ। रिंगलेटहरू एक-अर्कामा कडा हुन्छन्। केहि मान्छे भन्छन् कि4कपाल az पैटर्न छ, तर यो गलत छ। कपालले तीव्र अंकहरू बनाउँदैन र यसको सट्टा पछाडि झिकेर मात्र आफैले वरिपरि घुमाउँछ। तर यो अझै पनि एक कर्ल हो! उदाहरणका लागि, 4c कपालसँग कसैले कसैलाई 12 इन्चको कपाल पछाडिको हुन सक्छ, तर यो मात्र प्राकृतिक प्राकृतिक वा राज्यमा 3-4 इन्च हुन सक्छ।
अधिक 4c प्राकृतिकहरू धोने वा जान जान चाहँदैनन्। शैली 4c कपालको सबैभन्दा लोकप्रिय तरिका मोड एक्स्ट र चोटी बहिनीको साथ छ किनकी उनि थोडा अधिक लम्बाई देखाउँछ र कपाल फैलियो र व्यवस्थित राख्न को लागी। तंग रिंगलेट सुपर ठीक र नरम देखि तार र मोटे देखि रेंज। 4C कपालको प्रायः उच्च पोथीको स्तर छ, यसले नमीको अवशोषण गर्न सजिलो बनाउँछ तर यसलाई हराउन सजिलो हुन्छ। तेल आधारित उत्पादहरू राम्रोसँग काम गर्छन् कि नमी भित्र निस्कनुहोस् र शैली हेरफेरको लागि पनि राम्रो हो। हाम्रो ब्लग LOC विधिमा हेर्नुहोस्! MNHE 4C कपाल क्लिप इन्स उनीहरु जस्तै तपाईंको बनावट जस्तै देखिन्छ जस्तो प्रभाव पार्ने निश्चित छन्।
कसरी हेरचाह गर्ने?
मानव कपाल एक्सटेन्सन
तिमी सक्छौ पनि प्रयोग गर्नुहोस् - अफ्रो क्रसेट कपाल त्यसैले तपाईं आफ्नो प्राकृतिक कपाल को सुरक्षात्मक शैलीको रूपमा बाड्न सक्नुहुन्छ वा यसलाई उच्च बत्ती वा पोनीटेलमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले भनेँ भोल्युम थप्न र तपाईंको afro बाल वा लम्बाईको लागि एक राम्रो तरिका हो किन्की कपालको एक्सटेन्सन किन्नुहोस्.
केन्की सीधा बाल क्लिप इन्स
तपाईंको टाइप4कपाल कसरी यसलाई नम्र, स्वस्थ र बढ्दो राख्न को लागी व्यवस्थापन गर्ने बारे केही सिफारिसहरू यहाँ छन्।
तपाइँलाई तपाइँको कर्ल पुन: संशोधन गर्नको लागि दैनिक नमिराइजर प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले यसलाई सजिलो बनाउन सजिलो बनाउनेछ कि बिहान बिहान छिटो स्टाइलको लागि। तपाईंको वांछित शैली सिर्जना गर्नको लागि माथिको सिफारिश गरिएको स्टाइल उत्पादनको प्रयोग गर्नुहोस्।
यी उत्पादनहरू 4C बनाइने बिना चिसोमा रहन मद्दतको लागि आदर्श हुन्। यी उत्पादनहरू पनि 4C कपाल व्यवस्थापन र मुलायम रहने उद्देश्य राख्छन्।
सुनी आइल जमैकन ब्ल्याक कास्टोर तेल एक्स्ट्रा डार्क
CURLS ब्लुबेरी ब्लस नियंत्रण टाँस्नुहोस्
Cantu शेन् मक्खन क्यान्सरिंग मरम्मत क्रीम मा छोड्छ
SHAMPOO र CONDITIONING
तपाइँ कसरी सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने आधारमा, तपाइँले फेला पार्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको टाइप4कपालले केवल हरेक 1-2 हप्ताहरू धुनु पर्छ।
ढोकाको छेउमा बाहिरिनु अघि तपाईंको कपाल धोईदिनु भन्दा पहिले केश बालीमा एक detangler प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो कपालको लागि कुन ढिलो ढङ्गले गर्न सक्नुहुन्छ आश्चर्यचकित हुनेछ।
तपाईंको detangler बाहिर पछाडि पछि एक कोश धोनुहोस्। निर्माण को हटाउन को लागी खोप मा फोकस गर्नुहोस।
सफा शैम्पू प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो एक मनपर्ने कुरा होई शेमि नमी जमैकन कास्टर तेल शम्पू हो। यो शैम्पू बिना कपाल हटाउन सफा गर्दछ।
गहिरो छोडेर कंडीशनरसँग समाप्त गर्नुहोस्। यसलाई तपाईंको केशमा 15 मिनेटको लागि टोप वा एक भ्यामरमा उत्तम परिणामहरूको लागि बस्नुहोस्।
के "पारंपरिक LOC विधि" भन्दा फरक "4 LOC विधि" टाइप गर्दछ? प्रक्रिया उस्तै छ। यद्यपि, टाइप4कपालका लागि प्रयोग गरिएका उत्पादनहरू सबै तेल आधारित उत्पादन हुनुपर्छ।
तपाईंको छोड-इन मुख्य रूपमा तेल-आधारित बनाइने वाटर-आधारित हुनुपर्छ, तपाईंको तेलको कास्टो तेल वा नरिवल तेल हुनुपर्छ, र स्टाइल क्रीमको लागि माथिको सुझावहरूको प्रयोग गरी।
सिल्क वा साटन, महिलाहरु! ती सुन्दर शोकहरू रातको वरिपरि स्कार्फ वा बोनटका साथ राख्नुहोस्। यदि तपाईंसँग समय छ भने, अर्को दिनको लागि तपाईंको कर्ल खिच्न अघि तपाइँ आफ्नो कपाल मोडिदिनु पर्दछ।
प्राकृतिक फ्लैट ट्विस्ट शैलीहरू - यो हाम्रो मनपर्ने देवीको रूपमा हो। फैंसी अफिस, विशेष अवसरों वा अनुहारको कपालको लागि आदर्श कामको हप्ताको लागि। साथै, हाम्रो प्रयोग गर्न निश्चित हुनुहोस् उत्तम सीधा क्रसेट बाल अतिरिक्त लम्बाइ थप्नका लागी।
Crochet Braids - ती चाँडै सबैभन्दा लोकप्रिय सुरक्षात्मक शैली बन्ने ग्लु वा विगको बिना तपाईंको कपाल लामो हुन्छ। संग crochet braids, तपाईं बाल जस्तै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मोहनकुमारी स्टाइलको लागि। Crochet braids सुपर सरल हो, र तपाईं यहाँ एक राम्रो ट्यूटोरियल हेर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको कपालको मुस्कान वास्तवमा हानिकारक छ !?
कसरी आशीर्वाद प्राकृतिक हुन्छ?
एथ्रोको बारेमा सत्य घुमाउरो कपाल
तपाईंको प्राकृतिक कपाल बढ्दै
कर्लफर्मर र वेभर्सर्स कसरी गर्ने
किन्की सीधा विग
किन्की सीधा बण्डल
रेटेड 4.745बाहिर
किन्की घुमाउने बन्डल
रेटेड 4.635बाहिर
Perm Yaki बंडल
रेटेड 4.705बाहिर
मोटे सीधा बंडल
रेटेड 4.605बाहिर
24HR बिक्री: 20% बन्द गर्नुहोस् 💖 म कपन कोड प्रयोग गर्दछ "20off" 💖 DISCOUNT @ 12PM समाप्त हुन्छ